🥇 ▷ Soo saarista Huawei Mate X ayaa dib loo dhigay illaa dhamaadka sanadka 2019 ✅
Soo saarista Huawei Mate X ayaa dib loo dhigay illaa dhamaadka sanadka 2019
Shaki la’aan, naqshadaynta taleefannada shaashadda isku laabma maaha hawl fudud. Huawei iyo Samsung labaduba waxay la soo baxeen dib-u-dhacyo ku saabsan moodalkoodii laablaabashada taasoo horseeday in dib loo dhigo sii deyntooda. Huawei ayaa la rajaynayaa in uu garaaco Samsung wuxuuna lahaan doonaa sharaf mudnaanta leh in ay noqoto shirkaddii ugu horreysay ee haysata taleefan isku laabma suuqa bisha Sebtember. Laakiin, sida warbixin cusub shaaca ka qaaday, tani ma dhici doonto.
Hadda, shirkadda lafteedu waxay xaqiijineysaa in taleefanka uusan diyaar u noqon doonin bisha soo socota sida lagu dhawaaqay, laakiin dhamaadka sanadka, iyada oo la fiirinayo soo bandhigideeda weyn inta lagu guda jiro rubuc koowaad ee 2020. Bayaankaas wuxuu yimid intii lagu jiray shir jaraa’id. Warbaahinta Shiinaha. Sida laga soo xigtay ilo kala duwan, sababta dib u dhaca ayaa u sabab ah dib-u-habeynta qaybo ka mid ah taleefanka. Waxyaabaha ay ka midka yihiin shaashadda ama badhanka sii-deynta ayaa dib loo habeeyay labadaba qaab iyo iska caabin. Hadda guddiga isku laabashada Terminalka waxay leeyihiin xaashi difaac oo ka sameysan waxyaabo u eg polycarbonate-sida.
Si kastaba ha noqotee, warbixinta ayaa muujineysa in shirkaddu ku kalsoon tahay in Mate X la shaacin doono ka hor dhamaadka 2019. Waqtigaan wuxuu noqon karaa in la hubiyo in taleefanka la heli karo inta lagu jiro xilliga fasaxa ka hor Sannadka Cusub ee Shiinaha, kaasoo bilaabanaya. horaanta sanadka dambe.
Warbaahinta sida fiican loo yaqaan ee TechRadar ayaa ka hadashay suurtagalnimada in Huawei Mate X ay ku jirto shaashado ka badan qaabkii asalka ahaa ee lagu soo bandhigay bilowga. Sida muuqata, shirkaddu waxay dooratay inay ku hirgasho muraayad dhabarka aaladda aaladda aluminium ah. Taas oo u horseedi doonta hirgalinta suurtagal suurtagal ah saddex ama in ka badan oo shaashad ah.
Sida horeyba loo ogaa, Mate X wuxuu leeyahay hal shaashad 8-inji ah marka si buuxda loo furo. Laabmaalkoodu yaa kordhinaya labo shaashadood oo cabirkoodu yahay 6.6 iyo 6.38 inji. Waa inaan sugnaa, sidaa darteed, taleefanka si rasmi ah ayaa loogala hadlayaa si aan u aragno inta isbeddelay ee la xiriirta naqshaddii asalka ahayd. Suuqgeynta aaladda, dabcan, waxay dhici kartaa inta lagu jiro bilaha Maarso ama Abriil. Lahaanshaha munaasabadda gu’ga Shiinaha.
Miyaad u maleynaysaa in Huawei uu ku dari karo shaashad saddexaad ee naqshada cusub ee Mate X?